Police-ka Laasqoray oo rasaas huwiyay Markab Dagaal oo lagaleeyahay Ingiriiska – SBC
Police-ka Laasqoray oo rasaas huwiyay Markab Dagaal oo lagaleeyahay Ingiriiska
Posted by editor on Julaay 9, 2011 Comments
﻿﻿Saaka ayay aheyd markii dekeda Magaalada Laasqoray ee gobolka Sanaag lagu arkay Markab nooca dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Ingiriiska islamarkaana ay saarnaayeen ciidan u dhashay dalkaasi oo kuwa dagaalka ah sida uu SBC International u xaqiijiyay Gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Siciid Nuur Dabeyl.
Gudoomiyaha ayaa intaasi ku daray in Markabkani uu yahay mid ka soo kicitimay Magaalada Barbarah ee Waqooyigalbeed Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigaye.
Gudoomiye Dabeyl ayaa sidoo kale sheegay in marka ay soo baxday Warkan in uu xiriiro la sameeyay Saraakiil ciidan oo ku sugan Degmada Laasqoray islamarkaana uu u sheegay in ciidamada Markabka saaran ay ka feejignaadaan.
Ciidamadii saarnaa Markabka dagaal ayaa saacado ka dib bilaabay in ay ku soo degaan Saxiimado iyo mid ka mid ah beebe yaasha Badda mara, ka dib waxaa rasaas kor u furay Ciidamada Amaanka Deegaankaasi iyagoona kasbay in ay dib ugu noqdaan Markabkoodii .
Ciidamada Poliska Degmada Laasqoray ayaa difaac ka xirtay Marsada Magaaladaas iyagoona sheegay in ay u diyar yihii talaabo ay ka qaadaan cidii ku soo xadgudubka gobolka .
Sikastaba ha ahaatee gudoomiyaha Gobolka Sanaag Mr Dabeyl ayaa sheegay in Maamulka Soomaaliland uu maalmihii dambe farageln xoogleh ku hayo gobolka Sanaag, taas oo uu maamulkaasu ugu doonayo waasida uu hadalka u dhigaye in uu ku darsado deegaanada uu dhulbalaarsiga ku heysto.